युद्धमा हारेका बा – मझेरी डट कम
दुई घन्टीमा सामाजिक विषय थियो पढ्नु पर्ने । सामाजिक सर कलासमा के छिर्नुभएको थियो । दुई तीन जना भोका स्यालहरू जस्तै देखिने मान्छेहरू कलास भित्र पसे र भने, “साथीहरू हो, हामी सधैं अन्याय र अत्याचारका विरुद्धमा लड्छौ । हामी चाहन्छौ साथीहरुको पढाईलाई असर नपरोस तर हामी विद्यार्थी भनेका खोक्रो किताब मात्र हेरेर, घोकेर, यो बुर्जुवा शिक्षा पढेर मात्र बस्ने हैन अब देशको लागि पनि केही गर्न पर्छ । एउटा व्यक्ति मज्जा सग भाषण छाटेर गयो । अर्कोले भन्यो आज हाम्रो माथि डाँडामा कार्यक्रम छ ।”
उनीहरू, “तपाईंहरू पनि त्यस कार्यक्रममा जानै पर्छ,” भन्दै कक्षाबाट बाहिर निस्के । सामाजिक शिक्षा पढाउने गुरु पनि चुपचापसँग कक्षाबाट निस्कनु भयो ।
मैले भनें, “अब हामी उनीहरुको कार्यक्रममा होइन घर जाने हो पढाइ हुँदैन भने किन बस्ने ?”
अर्कोले भन्यो, “तर कसरी जाने ? भाग्न लागेको देखे भने लैजान्छन । नगए पछि गोलि हानेर मर्दिन्छौ भन्छन् । नाकबाट बगेको सिगान पुछ्न नसक्नेलाई त गोलि हान्छौ भन्छन् अरुको त झन के हाल होला !”
हामीलाई भागेको देखेर एक जना करायो, “ए ए …..नभाग है नत्र.. ।”
एक जना साथीले भनी, “देख्खेले नि तिनीहरुले अब कहाँ छोड्छन् र हामीलाई । जाउँ लुकौँ त्यही तिनु र दच्कुन्को बोट भित्र ।”
तिनीहरुले देख्दैनन भनेर ऊ डरले लुक्न गई । बिचरी त्यही बोटमुनि कसले दिसा गरेको रहेछ । उसको मेड्डीभरि दिसा लाग्यो । “मरेछ नि को !” भन्दै बाहिर आई ऊ । अब तलाई गुले पनि छोडेन भने मान्छेले कहाँ छोडछन् र है हिहिहि……. हामी दुई, तीन जना साथीहरू भने मरीमरी हाँस्न लाग्यौ ।
“नकराऊ, आफूलाई भने यस्तो भया’छ तिमीहरूलाई हाँसो,” उसले भनी ।
“तँलाई लुक्न नजा त भनेको नि मान्याइहोस र खुब बच्नु पर्ने तलाई । हेरिन्थिस लुक्ने बेला अघिपछि के छ,” भनेर मैले भने ।
साथी कमलाले भनी, “हाम्रो त घरमा थाहा छैन । साँझ घर नपुगेपछि मार्छन मलाई ज्यै बाले,” उसले आँखाभरि आँशु पार्दै भनी ।
“तेरो मात्र हो र ? हाम्रो पनि त थाहाँ छैन नि । जेई, बाले त हाम्लाई स्कुल गएका छन् भनेका छन् नि । अब के गर्ने होला यिनीहरुकोभन्दा नि जेई, बाको डर छ । कहाँ गएकी थिइस ? किन गएकी थिइस ? अरु त आइसके नि तलाईमात्र जानुपर्ने भनेर अनेक प्रश्नहरू वर्षाए भने के जवाफ दिने ।”
बाले भने, “नानी हो म पनि माथि गाउँमै जाने हो । तिमीहरू डराउनु पर्दैनसँगै जाउँला ।” त्यसपछि हामी निडरका साथ बाजेको पछि पछि हिड्यौ ।
बाले हामीले लाएको स्कुलको ड्रेस देखेर सोधे, “तिमीहरुलाई स्कुलबाट नै लगेका हुन नानी ?”
“हो बाजे ।”
“नानी हो अहिले देश को हालत यस्तै छ । कसैलाई स्कुलबाट नै लगेका छन् कसैलाई घरबाटै लगेका छन् । आफ्नै दाजुभाइ को रगत आफैले पिइरहेका छन् । किन यस्तो गरेका होलान् ? मेरो छोरालाई नि अस्ति खेतमा काम गर्दै गर्दा तँ माओवादी होस भनेर आर्मी पुलिसले लगेर गएका हुन् अँझै फर्केर आएको छैन । त्यही पिर र चिन्ताले गर्दा आमाको हालत हेरिसक्नु छैन । एक्लो छोरो भविष्यको लौरो भनेर उसलाई आफ्नो रगत नै बेचेर ठुलो बनाएको तर अहिले उनै छैन । कतै पत्ता लाग्छ कि भनेर तर बजारसम्म गएको हुँ । तर खै ..।”
मैले सोधें, “बा कहीं कतै पत्ता लागेको छैन त ?”
“थाहा भएको भए किन भौतारिनु पर्थ्यो र नानी । उसलाई लग्नुभन्दा मलाई लगेको भए म आफै जाने थिएँ ।”
ती बालेसँगै बसेका अरु व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्दै गरेको सुने बाले भन्दै थिए, “बुढेसकालको सहारामा जन्मेको छोरा तर अहिले साथमा छैन । हाम्रो नभएर देश र जनताको लागि रगत बलि चढायो । राज्यपक्षबाट ऊ मारियो । एउटा सिङ्गो याम बितिसक्यो लड्दा लड्दै । रगतका टाटाहरू अँझै बाँकी छन् हत्केलाहरुमा । तर खस्किए जीवनका पाटाहरू । अहिले कोही छैन । क्यानभासमा तिनै छोरा र आमाको रगत र पसिनाको रङ्ग मात्र छ ।”
बाले चियाको चुस्किसँगै आफ्नो सन्तानको याद पिउँदै थिए सायद । मैले उनको याद भङ्ग गर्दै सोधें, “बा मलाई चिन्नुभयो ?”
“चिन्न गाह्रो भयो नानी ।”
“बा आज भोलि कता हुनुहुन्छ ?” मैले सोधें ।
बाले चाउरिएका गालाहरुमा खुशीका रङ्गहरू देखाउदै भने, “मेरो बस्ने कुनै घर छैन नानी म यही बाटोलाई घर बनाएर पनि हिंड्छु । बाटोमा हिड्दा, साइनो खोज्दै जाँदा भेटिन्छन् आफन्तहरू ।”
“अनि आमा ?”
“जब छोरालाई अपहरण गरेर लगे, ऊ फर्किने आशमा पर्खेर बस्यौं ऊ आएन । उसको आमा चाहिँ उसैको पिरमा दिनानुदिन गल्दै गई । म उसलाई खोज्दै गए । भेटियो पनि तर जसरी गएको थियो त्यसरी भेटिएन ऊ । बरु बन्दुकसँग भेटियो । मैले उसलाई भन्दुक छोडेर घर हिंड्न् आग्रह गरे तर उसले मानेन् र भन्यो । बा, म एउटा किसानको छोरो हुँ । खेतमा काम गर्दै गर्दा मलाई माओवादी भनेर मानर्को लगे र म भागेर बाँच्न सफल भए । त्यसपछि मैले सोचे अब भागेर हैन म उनीहरू सग लडेर बदला लिन्छु भनेर बन्दुक समाएको हुँ । तर अब मैले बदलाको बन्दुकभन्दा यो देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउनको लागि देश र जनताको लागि लड्छु भनेर हिडेको छु । मलाई नरोक्नुहोस । बरु आमालाई गएर सम्झाउनुहोस् र भनिदिनुहोस तेरो रगत हाम्रै लागि लडदै छ भनेर ।”
“त्यसपछि मैले उसलाई कहिल्यै आउन आग्रह गरिन । तर दैव लागेर कुन दिन लड्दा लड्दै देश र जनताको लागि रगत नै बलि चढाएछ । उसको मृत्युको खबर सुनिसकेपछि सहन नसकेर उसकी आमाले नि यो संसारबाट बिदा लिएर गई । म एक्लो भएँ ।”
“मैले जिन्दगी देखि हार खाएँ, रोएँ, कराएँ, बहुलाएँ केही लागेन मर्न पनि सकिन । कताबाट सोच आयो आँट गरे । एक्लै जिउनभन्दा देश र जनतासँगै जिउछु भनेर बदलामा बन्दुक बोकेरै हिडे म पनि । कोही माओवादी र कोही राज्यपक्षबाट मारिए । कोही अपाङग भए, कोही टुहुरा भए, कसैको काख रित्तीयो, कतिको सिन्दुर पोछियो । जसको कुनै सीमाना रहेन ।”
“देशमा आमुल परिवर्तन आयो । शान्ति सम्झौता भयो । नदीहरुमा रगत बग्न कम भयो । बम र बारुदका आवाजहरू सुनिन छोडे । हामीसँगै लडेका साथीहरू कोही मन्त्री भए । कोही प्रधानमन्त्री भए । ठुला ठुला महलहरू पनि ठड्याए । त्यसपछि जनताको संविधान पनि आयो ।”
“हामी केही राहत पाउने आशामा बसिरह्यौ । तर राहत को नाउमा आहत पनि आएन । खोक्रो आश्वासनका खोस्टाहरू मात्र बाडिरहे । हामीले सुनिरह्यौ । जो वास्तविक द्धन्दमा मारिएका थिए उनीहरुले राहत पाएनन् । अद्धन्दमा मरेकाले पाए ।”
“देशमा अन्याय, अत्याचार, हत्या, हिंसा, वलात्कार, भ्रष्टाचारका घट्नाहरुको अन्त्य गर्छौ, परिवर्तन ल्याउछौ भनेर सरकारमा गएकाहरू कति आफै त्यसको पछि लागे । आफू परिवर्तन भए तर जनताका दुःखहरुमा परिवर्तन आएन । देश बनाउन सक्नेहरुलाई अघि सर्नै दिएनन् पछि हटाए । देश बिथोल्नेहरुलाई अघि पठाए अनि कसरी पाउँछन् नानी जनताहरुले न्याय । अँझै आशा छ देशमा जनताको शासन आउँछ कि भनेर जनताले न्याय पाउँछन् कि भनेर । अब आफ्नो जिन्दगी र जीवनको आशा त यसै टुटीगयो । हामीले र हाम्रा छोराहरुले बगाएको रगतले न्याय पाओस यही छ चाहना ।”
मैले भनें, “बा, त्यो समयमा तपाईंसँग भेट भएपछि हामी पनि हिडेका थियौं केही समय । त्यो वाल्यअवस्थामा परिवर्तन ल्याउने आशामा । तर पछि हाम्रो पढाइ बिग्रने डरले हामी हिडेनौ ।”
“तपाईंसँगै लडेकाहरू मन्त्री भए प्रधानमन्त्री भए । तर तपाई किन यसरी भौतारिनु भएको छ एक्लै ? तपाई जस्तो मान्छे हुनुपर्ने थियो त मन्त्री अनि मात्र पो जनताले न्याय पाउने थिए ।”
बाले एउटा हात देखाउँदै भने, “हेर नानी यही हो हाम्रो देश र जनताको लागि लडेको चिनो । हामी जस्ता अपाङगलाई कसले बनाउँछ मन्त्री ?”